Maitiro ekushandura iro password password yeedu Gnu / Linux system | Linux Vakapindwa muropa
Icho chokwadi chekuti chakabiwa chifananidzo cheLinux Mint chakaburitswa chakandiita kuti nditange kurangarira ndedzipi sarudzo nemirairo zviri muGnu / Linux kusimudzira chengetedzo yeanoshanda system. Mumwe wemirairo iwoyo unotibvumidza kuti tishandure iro password password iyo yatinopinza mukumisikidza yedu yekushandisa system. Zvisinei uyu murairo, chishandiso chinobatsira chevakuru vazhinji inoda iro rekutanga password saka haigone kushanda seyekushandisa yekushandisa.
Kuti uwane chinja midzi password yeLinux yedu kutanga isu tinofanirwa kuvhura terminal uye tinyore rairo Su. Uyu murairo unotibvumira kunyoresa sevashandisi vemidzi uye izvo zvakakosha kuti tishandure iro password password. Kana tangova maneja, isu tinofanirwa kudaro mhanyisa iyo PASSWD yekuraira.
Kuchinja iro password password ibasa rakakosha mune yakachengeteka sisitimu yekushandisa
Uyu murairo wakanyorwa sezvazviri mune terminal uye mushure mekudzvanya kupinda, iyo terminal ichaburitsa mameseji kupi inotibvunza isu password nyowani uye mushure mekunyora, ichatikumbira kudzokorora iyo nyowani nyowani senzira yekuchengetedza uye kuona kuti tanyora nenzira kwayo.
Kana tangopinda nyowani nyowani kaviri, iyo Gnu / Linux system inozoziva iyo nyowani nyowani seidzi midzi password uye chichava icho chakakosha. Saka kana, semuenzaniso, chimwe chinhu seLinux Mint chikaitika kwatiri, kuchenesa mafaera akakuvara uye kuita iyo passwd yekuraira zvichave zvakakwana kuita kuti system ive yakachengeteka zvishoma.
Mune masisitimu mazhinji, chimiro chekuve mushandisi wemidzi hachiwanikwe nemutemo weSU, asi pane iwo PASSWD rairo, saka mune idzi kesi, kutanga tinodzika semirairo yekugovera uyezve tinomhanya kuraira.
Gnu / Linux yakachengeteka kupfuura mamwe masisitimu anoshanda uye kushandiswa kwemirairo iyi chiratidzo chakanaka cheizvozvo. Kunyangwe yakashandiswa zvisirizvo inogona kuita kuti sisitimu inyanyo chengeteka iripo, zvese zvinoenderana nesu Rangarira icho!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Maitiro ekushandura iro password password yeedu Gnu / Linux system
Kana iwe ukanditendera, Joaquín, zvinhu zvinogona kuwedzera kuomarara kana, nekuda kwechikonzero chero chipi zvacho, isu tikasarangarira password yemutungamiri ... uye, kunyangwe zvakadaro, inogona kugadziriswa tisina kumbokanganisa zvakawanda.
Vanozviudza zvinoshamisa, semuenzaniso, apa:
Chokwadi ndechekuti zvinotyisa kuziva kuti chero munhu ane mukana wekupinda mumushini uye ndiani anoziva izvi, anogona kuwana nyore nyore mushandisi wako sekunge iwe uriwe ...
Cinnamon 2.8.8 inowanikwa muLinux Mint 17.3